Yiba ngobuchule kwigumbi lokuhlala.. - I-Airbnb
Yiba ngobuchule kwigumbi lokuhlala..
Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe onguGayatri
UGayatri unezimvo eziyi-101 zezinye iindawo.
Wamkelekile kwiJaat House enye indawo ePune, "Maesto la Sala"... Ibhonasi enkulu yindawo. Enye yezona ndawo zintle ePune. "I-Maestro la Sala" I-Pune ligumbi labucala elinendlu yangasese.. Hlala kwinduli eluhlaza nendawo ezolileyo kakhulu. Ukubona kakuhle induli. Ilungele umhambi ohamba yedwa, isibini, Umntu wezoshishino okanye amaqela abantu abayi-3. Ungafikelela yonke into kufutshane nendawo ..
UPune wabizwa ngokuba "yiOxford of the empuma" nguJawaharlal Nehru, uMphathiswa wokuqala waseIndiya. I-Pune idume ngeFilm Institute of India, i-NFA-National Film Reserve yaseIndiya yeyona venkile inkulu yeefilimu eIndiya, i-NDA, eyona yenkonzo yokuqala ye-tri-service ehlabathini, iminyhadala yenkcubeko yolutsha. Indawo yam eseKothrud yabizwa ngokuba yenye yezona ndawo zikhawulezayo eAsia yiGuinness Book of World Records. I-Kothrud iphinde ithandwe kakhulu ngamaziko ayo emfundo. Ikufuphi neBombay Banglore Express Highway..Ndiyakuthanda ukwamkela abantu ekhayeni lam!! Kwaye le ndlu "likhaya elikude nekhaya" kwaye liyakhanya, lifudumele kwaye litofotofo..Le yiflethi yam eyi-3 BHK Bunalow, "Maestro la Sala.." ifumaneka kule flethi okanye indlu ekwicomplex. Igumbi linegumbi lokuhlambela elinebhedi enkulu.. Ukukhanya kwelanga okupheleleyo kunye nehlathi elihle eliluhlaza. Ukuze uthethe inyani ! Le ndawo yenye yeendawo eziphambili ePune. Isondele kakhulu kwizithuthi zikawonke-wonke.
Kukho enye yezona gadi zihamba phambili zeLegendary Pandit Bhimsen Joshi,apho unokuphumla khona ngezinto zokuzilolonga.
Mumbai-Banglore Express way..1 km. I-Lonawala ikwisithuba nje seyure enye ukusuka kwindawo yam.
Mna noMyeni wam sihlala kule ndlu... Kwaye Ukuhlala Kwasekhaya kumalunga nokwabelana ngenkcubeko, isiko, ukutya, iingcamango kunye nezinto ezininzi.. Ngoko silapha ukuze sikuncede ukuba ufuna ukukhokelwa xa ufuna ukuhambahamba ePune. Ukuba ufuna ukuba noxolo lwakho - akukho ngxaki. Ukuba ufuna ukuncokola ngokuhlwa, kunye neti, wamkelekile ngokufudumeleyo..
Mna noMyeni wam sihlala kule ndlu... Kwaye Ukuhlala Kwasekhaya kumalunga nokwabelana ngenkcubeko, isiko, ukutya, iingcamango kunye nezinto ezininzi.. Ngoko silapha ukuze sikuncede…